CTO dia nanambara mpandaha-teny ho an'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny fizahantany faha-9
Home » fivoriana.travel » CTO dia nanambara mpandaha-teny ho an'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny fizahantany faha-9
Septambra 18, 2018
Ny talen'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Asa ho an'ny Karaiba dia hanao kabary lehibe amin'ny Fihaonambe fizahan-tany momba ny fizahantany faha-9.
Claudia Coenjaerts, talen'ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny asa (ILO) ekipa miasa sy birao ho an'ny Karaiba, dia hanao kabary lehibe amin'ny Fihaonambe momba ny fizahan-tany momba ny fizahantany faha-9 napetraka ny 28-30 novambra 2018 ao amin'ny Grand Cayman Marriott Beach Resort, Grand Cayman , ny Nosy Cayman.
Nokarakarain'ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) miaraka amin'ny Departemantan'ny fizahan-tany any Cayman Islands (CIDOT), ny fihaonambe dia handinika ny fivoaran'ny mpiasan'ny fizahan-tany ao amin'ny faritra misy ny lohahevitra Fananganana mpiasa mpiaro ny fizahan-tany mahomby sy mahavita be ary maharitra eto Caribbean hiady amin'ny fifaninanana eran-tany .
Ny kabary nataon'i Coenjaerts, "Ny hoavin'ny asa - inona no ho lasa ara-dalàna vaovao," dia hiresaka fiovana lehibe mitohy eo amin'ny sehatry ny asa, izay heverina fa hihamafy amin'ny ho avy. Hodinihiny ny olana atrehana amin'ny fananganana mpiasa manana fahaiza-miasa mahomby sy manome sosokevitra amin'ny fieritreretana indray ny fifandraisany amin'ny loharanon'olombelona amin'ny tontolo fizahan-tany izay miovaova hatrany.
Coenjaerts dia mitondra fahalalana sy traikefa be dia be ho an'ny dinika izay nanatevin-daharana ny ILO tamin'ny 1995 izay niasany be tany Afrika, Azia, Eropa ary Amerika Avaratra. Talohan'ny andraikiny ankehitriny, Coenjaerts dia niasa nandritra ny 18 volana tamin'ny naha filoha sy talen'ny birao mpanatanteraky ny Fair Labor Association any Washington, DC
Tamin'ny alàlan'ny asany tao amin'ny biraon'ny sehatra ILO, Coenjaerts dia nahazo fahatakarana betsaka momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny fampandrosoana ILO ary koa ny fahaiza-manao amin'ny sehatry ny fitovian'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny toeram-piasana, ny fampiasana zaza tsy ampy taona, ny fenitry ny asa iraisam-pirenena, ny zon'ny mpiasa, ny fandraisana andraikitry ny mpiara-miasa marobe, ny asa famoronana, asa ho an'ny tanora, famoronana asa any amin'ny fanjakana marefo, fanarahan-dalàna amin'ny asa sosialy sy ny asa amin'ny rojom-panolorana amin'ny akanjo sy kiraro; elektronika sy fambolena.
Teratany belza, Coenjaerts dia manana mari-pahaizana licence of arts and Master of Arts in Sociology avy amin'ny oniversite katolika any Leuven any Belzika.
Ny Fihaonambe momba ny fizahantany momba ny fizahantany faha-9 dia tonga tamin'ny fotoana niatrehan'i Karaiba fifaninanana eran-tany amin'ny indostrian'ny teknolojia avo lenta sy ny fanavaozana ary eo am-piakarana ny antso ho an'ny fandinihana indray ny fomba fifandraisan'ny mpitondra fizahan-tany amin'ny mpiasa. Ity hetsika ity dia hiara-hientana amin'ireo mpizaha tany amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina, manam-pahaizana momba ny zon'olombelona, ​​mpanazatra fizaran-tany / mpanazatra sy mpanolontsaina ary koa mpianatra fizahantany sy mpitsidika amin'ny oniversite.
Ireo solontena dia hizara paikady sy fomba fanao tsara indrindra amin'ny olana misy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny, hanome vaovao farany momba ny lafiny maro amin'ny fampandrosoana fizahan-tany, hanatsara ny fahaiza-manao ary handray anjara amin'ny tambajotra matihanina.
Ny fandaharam-potoana mandritra ny telo andro amin'ity taona ity dia misy Kilasy Master roa mifampiresaka sy azo ampiharina ampiasain'ny manam-pahaizana momba ny lohahevitra mahay sy mavitrika. Ny Master Class iray dia hifantoka amin'ny famohana ny fahafahan'ny mpiasa sy ny fanamafisana ny zava-bita manerana ny toeram-piasana amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba fanao matanjaka, fa ny Master Class faharoa kosa dia hiditra amin'ny anjara asan'ny matihanina momba ny Human Resources amin'ny fananganana marika orinasa.
Raha mila tsipiriany misimisy momba ny kaonferansa - tohanan'ny Dart Enterprises Ltd. an'ny Nosy Cayman - kitiho eto.
Ny fahefana fizahan-tany any Hawaii dia manome anarana ireo homem-boninahitra ny fizarana mari-pankasitrahana fizahan-tany
Nitifitra balafomanga ny Syriana namoaka ny fiaramanidina miaramila Rosiana